Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): May 2011
15 Lang na Jinghpaw wunpawng Dinghku Dabang
at 5/31/2011 09:43:00 AM
15 Lang na Jinghpaw Dinghku Dabang hpe American mungdan Texas kaw ngwi pyaw ai hte galaw ngut kre la lu sai lam chye lu ai.
Kachin Christian Family camp hpe shaning shagu ndai tenegalaw ai lam chye lu ai.American mungdanamemorial day masat nhtoi ten mung rai nga ai.
Dai ning gaw shawoi shaning na hta sadu shang lawm ai jinghpaw wunpawng myu sha ni grau law ai lam chye lu ai.Du sa ai yawng marai 300 jan re lam chye lu ai.
Ngai hugawng chyawm gaw bungli kyin taw majaw nlu du lawm kau dat sai.
Florida Jackson ville kaw nga ai hugawngamanang wa Maran hpau wung David sadu nna tsun dan ai hpe garan dat nngai law,sumla kaw mu ai laika buk gaw camp kaw na la wa ya ai Maran davidakum hpa rai sai.chye ju kaba sai yaw hkau David.Ndai laika bukalam chyi myi tsun dan mayu nngai.United state nga myusha niahkringdat laika buk(Kachin Directory 2010-2011) rai nga ai.KAA (Kachin American Association) kawn kalajang ai lam chye lu ai.USA kaw nga ai state shagu na myu sha niaaddress hte contact Numbor ni mu lu nga ai,Naw ku hpung,Myusha hpung yawngahkring dat ni mung lawm nga ai.Ngai hugawng zawn USA nnan du ai niamatu na chying wa akyu rawng nga mali ai.Buga hkanetam shamat kau , gara de du mat wa sai nchye ai manang ni hpe ndai laika buk hta bai mu tam la ai hku re.KAA hpe mung grai chye ju dum sai lam shana mayu nngai law.Htawm hpang de ndai hta grau ai myu sha lam hta myu sha ni yawng shang lawm shakut nga ga law.
တရုတ် စီးပွားကျွန် ဖြစ်လာမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ
at 5/30/2011 01:56:00 PM
ဗမာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့  ရေရှည်ပေါ်လစီရဲ့  အရေးပါတဲ့နေရာမှာ ပါပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒါကို သူတို့အကောင်အထည်ဖော်တာပဲ။ အဲဒါ ကျနော် ဘာကိုဆိုလိုတာလည်းဆိုရင် အမေရိကန် စူပါ ပါဝါအနေနဲ့ အာဏာရှိလာချိန်မှာ အမေရိကန်အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်အမေရိကဟာ ငါရဲ့  ရပ်ကွက်ပဲလို့ ကြေညာပြီးတော့ ဒီဟာကို သူတို့ မောင်ပိုင်စီးတယ်။ သဘောက သူတို့ရဲ့  အာဏာကို သူတို့ထုတ်ပြတာပေါ့။ တရုတ်ကလည်း အခုအခါမှာ ကြည့်လို့ရှိရင် စီးပွားရေးအရ ဒုတိယဖြစ်လာပြီ။ စစ်ရေးအရလည်း ဒုတိယဖြစ်လာပြီ။ အဲဒီလို ရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကို တိုးချဲ့ တာပေ့ါ။ သူတို့ရဲ့  အာဏာကိုပြတာပေါ့။ အဲဒီလို့ ပြတဲ့အချိန်မှာ တရုတ်က ဘာရူးလာလည်းဆိုတော့ အမေရိကန်က သူတို့ကို ဝိုင်းမှာကြောက်တော့ တရုတ်က ဘာလုပ်လာလည်းဆိုတော့ သူ့ကိုယ်သူ ဝိုင်းလိုက်ပြီး ဒီဟာက ငါရဲ့  ပိုင်နက်ပဲဆိုပြီး ကြေညာလာတယ်။
at 5/30/2011 01:45:00 PM
by Moethee Zun
သိန်းစိန် တရုတ်ပြည်ကိုသွားစဉ်မှာ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ သမတ ကင်ကျုံ အီး နဲ့ ပီကင်းမြို့ Zhaolong Hotel ဟိုတယ်မှာ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံ ခဲ့တယ်။ တရုပ်အစိုးရက စီစဉ်ပေးတာလို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ အမေရိကန် ဗဟို ထောက်လှမ်းရေးက မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုးရီယား ဆက်ဆံရေးကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေပြီ။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ မဆက်ဆံဖို့ အမေရိကန် သမတ ကိုယ်စားလှယ် ဒေးဗစ်ယွန်း ကလည်း မြန်မာ ကြံ့ဖွတ် အစိုးရသစ်ကို သတိပေးခဲ့တယ်။ အခု စီနိတ်တာ မက်ကိန်း ခရီးစဉ်မှာ လည်း မြန်မာအစိုးရသစ်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဒါမျိုးတွေကိုရှောင်သင့်တယ်။ သူကိုတရုပ်ကရောအမေရိကန်ကပါ သန်းရွှေ ခေတ်လွန် မှာ မြန်မာ စစ်တပ် ရဲ့ပုံရိတ်ဆိုးကို သူဆက်မွေမခံဖို့သူကို ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့သူတို့ သတိပေးနေကြတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သန်းရွှေ လမ်းကြောင်းကနေခွဲထွက်ဖို့ လိုပါကြောင်း။
by Moethee Zun blog spot
Hpyen masa tsaw dik sadi maja ladaw masat
at 5/24/2011 11:14:00 AM
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyen Dap kaw nna, Mungdan ting de tsaw dik sadi maja ten masat matsun dat ai lam chye lu ga ai. Ya ten Myen Hpyen ni hte shada maja nga ai kaw nna madang tsaw dik masat nna tinang uphkang ginra shagu de mi na hta grau shim lam jahkrat galaw sa wa nga sai lam chye lu ai. Lai wa sai, shata man 1 hta tinang ginra de ahkang n jaw ai shang wa ai majaw Myen hpyen dap, dap dung up langai si hkrum sai re. Ndai laman hta mung Dap ba2npu dapdung 14 ginra Hkadang post makau hta Jahtu Zup hkridun Myen hpyen ni gaw amyawk kaba gap jahkrat nna, minit 10 laman sinat tat ai re nga nna hpyi-nem wa ai mabyin ni byin lai wa sai. Bai ndai bat hta sha Dapba5npu, dapdung 25 ginra de Myen hpyen ni kaw nna sinat kaba gap satu ai lam ni galaw ai majaw KIA, Dailawn Rung kaw nna laja lana aming shapraw sa wa ai lam chye lu ai.
Ndai ten gaw Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni yawngamatu yup-tung hpa-wa ten rai nga ai. Ndai ten hta n yup si mat na ahkyak nga ga ai. Shada jahpyak n kawng hkat nna ninghkaw jan pru wa ten hta yup malap taw ai amyu ni n rai hkra jawm sadi maja madi shadaw sa wa ra ai ten rai nga sai.
Dap 11 hte sam pai hkan myen hpyen ni hte Gap hkat nna myen hpyen ni mung 10 jan dang si hkrum ai lam soi sam na lu ai.myu tsaw shagan nkau myi mung nma grai sawng ai lam gahtap na lu ai.
Myen Hpyen ni Jinghpaw Wunpawng Ginra de Amyu shamyit masing hpang wa nga sai.
at 5/22/2011 10:47:00 AM
May 18 jahpawt kaw na Myen Hpyen ni anhteaginra hte hpyendap ni hpe gasat hpang wa nga masai, Dapdung (11), (5), (25) hte Dapba(3), Laiza Mare hkan jahte tam gasat na matu hkyen wa nga masai.
Dapdung(11) ginra de htu lung wa ai Hk.L.Y 29,37 hte 121 ni gaw tsawmra hkala nba byin nna bai htingnut mat wa sai lam chye lu ai, Myenhpyen ni htingnut mat wa ai lam makau na mare kahtawng ni hpe mung wan nat jahten mat wa ai lam hpe mung na chye lu ai.(dap dung-11 ginra ngu ai gaw Mogawng/Namti Mare kaw na Myitkyina mare lahta Nam Koi Mare du hkra rai nga ai.)
Anhte yawng tinggyeng hkamsha ai lam hpe naw tawn kau nna, anhteahpyen hpung hpe madi shadaw ga, mai byin ai garum ntum ni hpe jaw mat wa ga, yawm dik hpang kaw na Kyu hpyi lawm na matu set lasau rai nga ga. Myen hpyen wa gaw Jinghpaw mahpaw yawng hpe sat shamyit hkyen nga masai.
Ndai kaw na re: http://overseaskachinassociation21.blogspot.com
မြစ်ဆုံဆည်ကြောင့် `ပြည်တွင်းစစ်´ ဖြစ်နိုင်ဟု KIO သတိပေး
at 5/22/2011 10:08:00 AM
ကချင်ပြည်နယ်တွင် တည်ဆောက်မည့် မြစ်ဆုံဆည်သည် ပြည်တွင်းစစ်အထိ ဦးတည်သွားနိုင်သဖြင့် စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပါရန် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO က တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်းတောင်ထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ရေးသားပေးပို့လိုက်သည်။
Myen-KIA majan byin wa na de shanawng nga
at 5/21/2011 10:52:00 AM
Road Construction: Declare war to the KIA Brigade 4? (Photo)
Du Kaba James Interview
at 5/16/2011 04:00:00 AM
Laksan hpyen dapalam hkaja yu ga
at 5/14/2011 12:12:00 PM
Ndai http://www.blogger.com/img/blank.gifkaw Click+++အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့++More
UNHCR welcomes Malaysia refugee deal
at 5/12/2011 09:46:00 AM
Click++More++++UNHCR welcomes Malaysia refugee deal
တရုတ် အင်အားအတွက် ပထ၀ီနိုင်ငံရေး
at 5/11/2011 11:04:00 AM
Mali hkrangaShagun laika hti yu ga
at 5/11/2011 10:34:00 AM
Ndai kaw dip dat ga+++
Wam wam dam dam Shanglawtashawng lam
(Analysis and Opinion)
Obama gaw American mung dan kaw sha ngai ai wa nre nga nna dang rang hkat nga ma ai.dai daw lek mat yu yu ga
at 5/11/2011 10:20:00 AM
အယ်လ်ကိုင်ဒါ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ရပ် (၃၀)
at 5/07/2011 10:32:00 PM
အစ္စလာမ် ဆိုသည်မှာ အာလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အမိန့်တော်ကို နာခံခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ သွားရာလမ်း (whttp://www.blogger.com/img/blank.gifay to peace) ဟု ဖွင့်ဆိုကြသည်။ သို့သော်
copy by http://www.maukkha.org
at 5/07/2011 09:42:00 PM
BURMA SOLDIER - (in Burmese) JOIN THE CLANDESTINE RELEASE INTO BURMA from BURMA SOLDIER on Vimeo.
Navy seal ngu ai hpa rai ta?
at 5/05/2011 10:19:00 AM
Death of bin Laden news
at 5/03/2011 10:27:00 AM
by Moethee Zun သိန်းစိန် တရုတ်ပြည်ကိုသွားစဉ်မှာြေ...
Myen Hpyen ni Jinghpaw Wunpawng Ginra de Amyu sham...
မြစ်ဆုံဆည်ကြောင့် `ပြည်တွင်းစစ်´ ဖြစ်နိုင်ဟု KIO သ...
Obama gaw American mung dan kaw sha ngai ai wa nre...
BURMA SOLDIER - (in Burmese) JOIN THE CLANDESTINE ...